Ciidanka KGS oo gacanta ku dhigay ninki weerarka bambo ka geystay Baydhabo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidanka KGS oo gacanta ku dhigay ninki weerarka bambo ka geystay Baydhabo
Ciidanka KGS oo gacanta ku dhigay ninki weerarka bambo ka geystay Baydhabo
Ciidanka ammaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa gacanta ku dhigay nin xalay bambo gacmeed ku weerararay goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku taalla xaafada Onodka ee magaalada Baydhabo, kadib howlgal ay sameeyeen.
Ninkan ayaa xalay fiidkii gaar ahaan xilligii afurka weerar bambo gacmeed loo adeegsaday ku qaaday maqaaxi yar oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah iyo askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed.
Ciidanka ayaa weerarka kadib howlgal ay bilaabeen waxaa u suuragashay in ay gacanta ku soo dhigaan ninkan oo ka mid ah dadka degaanka kadibna waxaa loo dhaadhiciyay saldhiga booliska magaalada Baydhabo.
Saraakiisha ammaanka ayaa ninkan weydiiyay sababta ku kaliftay in weerarkaasi oo uu ku dhaawacay afar qof geysto, wuxuuna tilmaamay in ujeedkiisa uusan aheyn dhibaateynta askarta balse uu beegsanayay dadka kale ee caadiga oo uu sheegay in ay ka horjoogsadeen kaarka lagu bixiyo raashiinka.
Ninkan oo markii hore looga shakiyay Shabaab ayaa wuxuu sheegay inuusan jirin urur uu ka tirsan yahay balse falkan uu geystay ay ka keentay oo keliya ciil uu isbaday, oo ku wajahan dadka u diiday kaarka.
Laamaha ammaanka ayaa gacanta ku haya ninkan weli ma aanay shaacin waxa ay ka yeelayaan, Magaalada Baydhabo ayaa inta badan mararka ay ka dhacaan falalka ka baxsan amniga waxaa dhacda in gacanta lagu soo dhigo ragga weerarada geysta, taasi oo suuragelisa wada shaqeyn ka dhaxeysa ciidamada iyo shacabka iyo in dadka magaalada degan ay aad isu garanayaan, maadaama magaalada ay kooban tahay.